Zororo reCrise - Ndeipi nzvimbo inonyanya kufarirwa? | Absolut Kufamba
Zororo Rezororo: Ita Kuti Zviroto Zvako Zvese Zvizadzikiswe!
Susana godoy | | Greece
Kana iwe uchida kuisa parutivi ndege uye zvakare mota kana chitima, hapana chakafanana nekubheja pane imwe yenzira dzakasarudzika dzekufamba. Mahofisi echikepe anogara ari mamwe eaya mazano aunofanirwa kuzadzisa kamwechete muhupenyu hwako. Inogona kuve rwendo rwekudanana kana iwe uchida kana mhuri, zvinoenderana nezvinodiwa zveumwe neumwe, asi mune mbiri zviitiko zvinotarisirwa zvezviroto zvedu zvichazadzikiswa. Haungade here kuti zviitike?
Ndokusaka mushure meiyi nguva yese yedenda, isu tinofanirwa kupemberera kudzoka kwekufamba netsika. Nehungwaru hongu, asi kuzadzisa iwo maroto atakataura uye ayo akavanzwa kwenguva yakareba. Tinokutaurirai mose zvakanakira rwendo rwakadai nenzvimbo dzaunofarira kushanyirwa.
1 Greece: Imwe yenzvimbo huru dzevashanyi
2 Sei uchienda kune ngarava?
3 Zororo rezororo, nguva yekuverenga?
4 Chii chandinofanira kuita rwendo rweMediterranean
Greece: Imwe yenzvimbo huru dzevashanyi
Kunyangwe chiri chokwadi kuti isu tinogona kutaura nezvenzvimbo dzinoverengeka nenzira yezororo rezvikepe, maGreek Islands ndomumwe wevanonyanya kufarira. Izvo hazvina basa kana iwe watove wakasvika kunharaunda iyoyo, nekuti nekuda kweiyi nzira yekufamba, iwe uchaiwana mune yakanyanya kukosha nzira. Iyo Mediterranean inogara iri chishongo chekuwana uye nekudaro, Greece ndiro dombo rayo rakajeka.. ari cruise greece Iyo ndeimwe yeakasarudzwa kwazvo nekuti nzvimbo ino ine hupfumi hwakasiyana hwezvinocherwa mumatongo, nekudaro ichitisiira nharaunda dzinozoratidzwa mumaziso edu.
Asi kwete iye chete asi kumira muAtene neAcropolis yayo ichave imwe yemapoinzi akakosha, pasina kukanganwa Crete, sezvo iine zviteshi zviviri zvezvikepe zvevashanyi. Ikoko iwe unogona kushanyira Imba yeKnossos, iyo zvakare inokushamisa iwe nemasara ayo uye yakakosha poindi yechiGreek budiriro. Iwe zvechokwadi wakanzwa nezveMykonos yemahombekombe ayo. Nekudaro, ndeimwe yenzvimbo dzakasarudzwa kana uchimira parwendo rwako. Kuguma muSantorini pamwe nekunyura kwezuva kwaro. Iye zvino iwe unonzwisisa zvishoma zvishoma nei Girisi neMediterranean iri imwe yenzvimbo huru!
Sei uchienda kune ngarava?
Kunyangwe zvingaratidzika semubvunzo watinoziva kupindura, isu tinokupa iwe zvikonzero zvishoma zvekuti ubvise. Tiri pachena kuti iyo ngarava yekufamba Zvinotisvitsa kunzvimbo dzisiri nyore kuwana nedzimwe nzira dzekutakura. Ndokusaka kuve chinhu chausingaite nguva dzose, unogona kuchirarama zvakanyanya zvakanyanya. Kutanga kubva ipapo chiitiko chakazara chose uye chine hunyanzvi, uchave nesarudzo yekuita zviitiko zvakasiyana asi usingabve panzvimbo imwechete. Nekuti muchikepe iwe unowana zviitiko zvemasikati, mitambo, varaidzo, yekuzorora nguva yedziva uye nezvimwe zvakawanda. Zvese zvakagadzirirwa kuti iwe unakirwe nekugara kwako!
Zororo rezororo, nguva yekuverenga?
Chinhu chakanakisa ndechekuti, senge chero rwendo rwunokodzera munyu warwo, zvakanakisa kuita kuchengetedza kwacho nekukurumidza sezvazvinogona. Kufambira mberi ndizvo zvese kugona kuronga zvirinani. Kana iwe uchida kusevha zvishoma, hapana zvirinani pane kusazviita mumwaka wakakwira uye kumirira kusvika Nyamavhuvhu kuti uzviwane. Sezvo mukuwedzera, iwo tembiricha yemamwe mapoinzi awuchashanyira ichave iri mukati meinotengeka renji kuti iwe ugone kunakidzwa nerwendo rwese kusvika kuzere. Kunyangwe chiri chokwadi kuti gore rese iwe unokwanisa kuita yako reservations zvichibva pane zvaunoda. Sezvo kana uchifamba semhuri, iwe uchazoda imwe nzvimbo uye zviri nani kuenda kumberi usati wapererwa nezvigaro. Rangarira kuti pachave paine zvinopihwa zvaunogona kutora mukana wekuchengetedza yakanaka pini.
Chii chandinofanira kuita rwendo rweMediterranean
Paunenge uchinge wasarudza uye kubhuka rwendo rwako uye nemazuva auchazoshandisa pazororo rako rekushanya, kusahadzika kunomuka, nekuti hauna kumbofamba nenzira iyi yekufambisa. Asi usazvidya moyo nekuti hapana chakasiyana nevamwe vaunoziva. Chinhu chakakosha ndechekuti iwe uzorore uye unakirwe zvizere zvizere nekuti igwa rine zvese zvaunoda pacharo. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mukuru izvo iwe zvaunogona kutora kutora mbatya zvese kuti uve wakasununguka mukati mezuva uye zvishoma zvishoma zvepamutemo zvehusiku. Izvi zvinoitirwa kuve mubhodhi.
Asi kana isu tikamira izvo isu zvatiri kuda kunakidzwa, zvinokurudzirwa kuti utore yako yakanyanyisa kugadzikana uye yakasarudzika maitiro. Naizvozvo, tinofanira kugara tichipfeka shangu dzakakodzera uye kuti mbatya dzakakodzerawo. Kune yerudzi urwu rwekushanya, yeuka kugara uchitakura kabhegi kadiki nezvinhu zvakakosha, pamwe nebhodhoro remvura uye kudzivirira kwezuva. Ramba uchifunga kuti kune dzimwe nzvimbo dzauchashanyira, ivo havatenderi kupinda nehembe dzakapfupika uye chinhu chekufunga nezvacho. Chokwadi ikozvino uchave wakajeka nezve kwauri kuenda, nzira dzako dzekutakura uye zororo rako rakakura rakakumirira!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zororo Rezororo: Ita Kuti Zviroto Zvako Zvese Zvizadzikiswe!
Kushanda kunze kwenyika: ndeapi nyika ane yakakwira fiber kumhanya?
Kushambidzika uye kuchengetedza muviri kuGreek yekare